Nomu M6 သည်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောဒီဇိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်းရှိသောအလွန်ပါးလွှာသောလက်ကိုင်ဖုန်း | Androidsis
နေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်နေသောကြမ်းတမ်းသောဖုန်းများအကြားတွင်နာမည်ကျော်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Nomu ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည် Nomu M6အလွန်ပါးလွှာသောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည် နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်စမတ်ဖုန်းလိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘဲနေ့စဉ်သာယာမှုကိုတစ်နေ့သယ်ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
ဤဆိပ်ကမ်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါရန်၊ သမားရိုးကျလူမှုရေးစုရုံးမှုအတွက်သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ရန်သာမကသာမကကွဲပြားသောစွန့်စားခန်းများ၊ ခရီးစဉ်များ၊ ခရီးစဉ်များ၊ လေ့လာရေးခရီးများနှင့်အခြေအနေများကြောင့်ကြမ်းတမ်းစွာဖြစ်လာနိုင်သည့်အခြားနေရာများနှင့်အတူလိုက်ပါရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်မည်ဖြစ်သည် ဤအရာအားလုံးသည်ဤအကာအကွယ်ပေးသောဆိပ်ကမ်းသယ်ဆောင်ထားသောကြာရှည်ခံမှုကြောင့်ဖြစ်သည်. အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Nomu M6 သည်ပိုမိုတက်ကြွသောလူမှုဘ ၀ ကို ဦး ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအခြားဖုန်းလိုဂရုစိုက်မှုနှင့်ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။ ၎င်းသည်၎င်းကိုအလုပ်နှင့်ပုံမှန်အတွက်သာမကအထွက်နှင့်စွန့်စားခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်စေသည်။
ဤ terminal တွင် IP68 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီး၎င်းသည်ရေ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ အပြင် ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုများ၊ တုန်ခါမှုနှင့်ပြင်းထန်သောအပူချိန်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင် MIL-STD-810G စစ်တပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူပါရှိသည်။.
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနှင့်အတူလေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်းမျောပါ။ မသွားရန်ဖြစ်သည်။ Nomu M6 တွင် GPS + GLONASS ရှိပြီးပြည့်စုံသောတည်နေရာစနစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့လျှို့ဝှက်ထားသည့်နေရာများ၌ပင်အဘယ်နေရာ၌ရှိသည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။.
၎င်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်း, ဒီလက်ကိုင်ဖုန်းမှာ ၅ လက်မ HD မျက်နှာပြင်ရှိတယ်၊ Mediatek MT6737 ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM 2GB၊ သိုလှောင်မှုပမာဏ 16GB Internal Memory ကို 32GB အထိသိုလှောင်နိုင်ပြီး 3.000 mAh ဘက်ထရီ၊ ရှေ့ဖက် 5MP နှင့် 8 Megapixel Sony ၏အဓိကကင်မရာတို့ဖြင့်မမေ့နိုင်သောအခိုက်အတန့်များကိုအတူတကွရယူနိုင်ပါသည်။ ချစ်သူ
ဤနေရာတွင် Amazon ရှိ Nomu M6 ကို ၁၂၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်သာဝယ်ယူပါ။
ဒီဖုန်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Nomu ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Nomu M6 သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့်မတူကွဲပြားသောစတိုင်နှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ
#Nomu # M6 - ၂၀၁၈ တွင်အပါးဆုံးနှင့်စတိုင်ဆုံးကြမ်းတမ်းသောစမတ်ဖုန်း ??
Nomu M6 သည်အပြင်ပန်းလှပရုံသာမက IP 68 ရေစိုခံနိုင်သည်။
အံ့သြစရာ ကြမ်းတမ်းသောဖုန်းကို NOMU ဖန်တီးပါသလား။ ငါကပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်သက်သောငါ့ဖေဖေအတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်သင့်သည်။
Android မှာ Blackberry ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစုထားပါ